I-Best ZirconiameteringNozzle (PMDQuality) yoMvelisi kunye neFektri | Funmeet
Sebenzisa i-zircon, ifakelwe i-PSZ mg kwaye ifake i-PSZ CA njengezinto ezingafunekiyo kunye ne-Y2O3 njengezongezo, i-zrsio4-zro2 itundish nozzle ene-density ephezulu yaphuhliswa. Iziphumo zokuthanjiswa kwamasuntswana, uxinzelelo lokubumba kunye ne-Y2O3 eyongeziweyo kwiipropathi ze-zrsio4-zro2 tundish nozzle zafundwa, kwaye isigaba sahlalutywa yi-XRD, Isakhiwo esincinci sahlaziywa yi-SEM kunye ne-EDS. iziphumo zovavanyo zibonisa ukuba izinto zokusebenza eziphezulu zinokufunyanwa ngokukhetha ukucazululwa ngokufanelekileyo kunye noxinzelelo lokubumba. I-Y2O3 ayinakwenza kuphela njengearhente yokuntywila kwizixhobo zirconium, kodwa ikwakhuthaza ukubola kweZrSiO4.
Uthotho lwe-PMD lweZro2 edityanisiweyo yodongwe kumbhobho wokufaka umlomo
Iziphumo zovavanyo zibonisa ukuba inkqubo ye-binder esekwe kwi-PS inamandla angcono, umphezulu kunye nokuguda xa ixutywe kwi-125 ℃ ye-10 min, kwaye ayinabuthathaka kubushushu, obulungele ngakumbi inaliti yodongwe. Kule siseko, umthamo wokuthwala umgubo wonyuswe nge-86%, Ukunciphisa iziphene kwinkqubo yokwahlulwa kunye nokuntywila kamva. Beka ukutya okuxutyiweyo kwiziko lomdaka lokuthambisa, funda uluhlu lobushushu bokuthotywa kwecandelo ngalinye le-binder ngu-TG, kwaye wenze ijika lokuthambisa elilungele le nkqubo. Emva koko utshise kumaqondo obushushu ahlukeneyo, i-degreasing kunye ne-sintering surface zibonwe yi-TEM. Utshintsho lwesigaba sekristale se-zirconia ceramics luphandwe yi-XRD. Iimpawu zoomatshini be-zirconia ceramics kubushushu obahlukeneyo zafundwa. Iziphumo zibonisa ukuba iiceramics ezidityanisiweyo zenziwe nge-1550 ℃ zineempawu ezintle. Iiceramics ezidityanisiweyo ezenziwe nge-alumina kunye ne-zirconia ezinemixholo eyahlukeneyo zikhethelwe i-degreasing kunye ne-sintering. Ubume kunye neempawu zeeseramiki ezidibeneyo zafundwa yi-XRD kunye ne-TEM, kwaye inokunciphisa iindleko zezinto ezisetyenzisiweyo.
Ngokwesiseko se-PMO1 uthotho lweemveliso zodongwe ezihlanganisiweyo ze-Zro2, ngokuqhubekeka kokusebenza kwetekhnoloji ekhethekileyo, i-Fangming New Material ngempumelelo i-R & D, ivelise uthotho lwe-PMD yokusebenza okuphezulu kwe-Zro2 edityanisiweyo yodongwe yokufaka ityhubhu. Banokucoceka okuphezulu, ukonyusa okunamandla, ukhukuliseko lomhlaba, ukoyikisa ukomelela, ukusebenza ubomi obude. Ubomi babo bobuchwephesha buphakanyiswa nge-30-50% ngokusekwe kuthotho lweemveliso ze-PMO1 zikwimeko efanayo yokusebenza.
Egqithileyo I-Zirconia Umbala wombane (PMO1 Umgangatho）
Okulandelayo: I-ZirconiaSlidePlate, iRingi (PM01Quality)